The Ab Presents Nepal » ओली बा.को सपना पुरा हुदै,नारायणीमा दशैँदेखि पानीजहाज चल्ने पक्का भिडियो हेर्नु होस् !
ओली बा.को सपना पुरा हुदै,नारायणीमा दशैँदेखि पानीजहाज चल्ने पक्का भिडियो हेर्नु होस् !
चितवन, साउन ४-: नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्न चार महिनादेखि निर्माणाधीन क्रुज (मिनी पानीजहाज)लाई नदीमा राखिएको छ । पानीबाहिर राखेर निर्माण गरिँदै आएको क्रुजको काम सकिएपछि पानीमा राखेर निर्माण सुरु गरिएको राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । चैतबाट जहाज निर्माण थालेको कम्पनीले पानीमा राखेपछि आउँदो दशैँमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
जहाज पार्किङ गर्ने स्थान पोर्ट निर्माणका लागि पाँच करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको कँडेलले बताउनुभयो । “सरकारले गएको आर्थिक वर्र्षमा एक करोड रुपियाँ सहयोग गरेको थियो, बाँकी चार करोड रुपियाँ हामी आफैँले लगानी गरेका छाँै कँडेलले भन्नुभयो ।
चितवनका छ जना युवा मिलेर नयाँ काम गराँै भन्ने सोचेर यो काम गरेका हौंँ’ उहाँले भन्नुभयो । उक्त पानीजहाज निर्माणमा कम्तीमा १५ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
जहाज सञ्चालक कम्पनीका अनुसार तत्कालका लागि काभ्रेघाटदेखि देवघाटसम्म चलाउने अनुमति लिइसकिएको छ । २५ किलोमिटरको दूरी रहेको यो जलयात्राका लागि जहाज हिँड्ने बाटोसमेत अध्ययन गरेको कँडेलले बताउनुभयो ।दैनिक १५० जनासम्म हेर्न आउने निर्माण हँुदै गरेको पानीजहाजको सुरक्षाका लागि बार लगाइएको छ । बाढीले क्षति नपु¥याओस्् भनी आरसीसी पिल्लर निर्माण गरी सिक्रीले बाँधेर राखिएको छ ।
काभ्रेघाटबाट चढेर देवघाट पुगी पुनः काभ्रेघाट पुगेर यात्रा सकिन्छ । जहाज रोक्ने स्थान निर्माणमा ठूलो लगानी रहने भएकाले एउटा ठाउँमा मात्र पोर्ट बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पानीजहाज निर्माणमा सहजीकरण गर्दै आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, नेपालका लागि यो नयाँ हो तर असम्भव होइन ।यसको प्रचारप्रसार भए नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने छ ।जङ्गल सफारी, संस्कृति अवलोकन, धार्मिक स्थलसँगै पानीजहाजको अनुभव चितवनमै लिन सकिने पाण्डेले बताउनुभयो ।
“युवाले पानीजहाज चलाउनु प¥यो भनेर सल्लाह लिन आउनुभएको थियो, मैले नै सहजीकरण गरेको थिएँ । अहिले सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेकोमा खुसी लाग्यो पाण्डेले भन्नुभयो । सानो आकारको यो पानीजहाज सञ्चालन भएपछि पर्यटक वृद्धि हुने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ सोचका साथ आएको योजनालाई प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गरेको प्रदेश सांसद कृष्णप्रसाद भुर्तेलले बताउनुभयो ।चालू आर्थिक वर्षमा पार्किङ स्थल निर्माणका लागि पहल गरियो र दुई करोड रुपियाँ बजेट छुट्ट्याइयो पनि सांसद भुर्तेलले भन्नुभयो, ‘‘यो चितवनको मात्र होइन नेपालको लागि खुसीको विषय हो, पर्यटन वर्ष सफल बनाउन यसले पनि सहयोग गर्छ ।